“२०२१ टि-२० विश्वकप जित्न भारतलाई धोनी चाहिदैन” आकाश चोपडा – WicketNepal
Birat Jung Rayamajhi, २०७७ श्रावण २८, बुधबार २०:४२
पुर्व भारतीय ब्याट्सम्यान तथा चर्चित कमेन्टेटर आकाश चोपडाले भारतीय क्रिकेट टिमले आगामी वर्ष हुने टि-२० विश्वकपमा महेन्द्र सिंह धोनी बिना खेल्न मुस्किल नहुने बताएका छन्। चोपडाका अनुसार २०२१ टि-२० विश्वकपमा धोनीको काँधमा भरोसा नगरी भारतीय क्रिकेट टिम आफ्नो दममा अगाडी बढ्न सक्छ।
चोपडालाई एकजना दर्शकले २०२१ टि-२० विश्वकपमा भारत धोनी बिना पनि खेल्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। यसको जवाफ दिने क्रममा चोपडाले भारतीय टिममा आगामी विश्वकप धोनी बिना खेल्ने क्षमता रहेको बताएका हुन्। यस्तै उनले २०२१ को अन्त्य तिर विश्वकप आयोजना हुने हुनाले धोनीलाई समावेश गर्नु सहि विचार नहुने पनि बताए।
“इमान्दार भएर भन्छु, मलाई लाग्छ हामि धोनी बिना पनि खेल्न सक्छौं। किनकि हामि २०२१ को कुरा गरिरहेका छौँ।” चोपडाले बताए।
चोपडाले यो पनि बताए कि धोनी हुँदा टिमलाई फाइदा भएता पनि धोनीको विश्वकप खेल्ने मनसाय छ या छैन पनि टिमले बुझ्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
“विश्वकप भारतमा आयोजना हुँदैछ त्यसैले पक्कै तपाई धोनीलाई खेलेको हेर्न चाहनुहुन्छ। तर पहिलो कुरा धोनी खेल्न चाहन्छन् ? म भनिरहेको छु कि मलाई लाग्छ उनि खेल्न चाहदैनन्।”
धोनीले अन्तिम पटक २०१९ एकदिवसीय विश्वकप खेलेका थिए
चोपडाले धोनीले खेल्न चाहेता पनि अझै १ वर्षको समय बाँकी रहेको र उनि बिना पनि खेल्ने बानि भारतीय टिमले गर्नुपर्ने बताए।
“धोनी खेन तयार भएता पनि अझै १ वर्षको समय छ। त्यसैले धोनी बिना खेल्न अब बानि गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ उनि टिममा नभए पनि भारतले विश्वकप जित्न नसक्ने भन्नेछैन।” उनले थपे।
उमेरले ३९ पार गरिसकेका धोनीले अन्तिम पटक गत वर्ष न्युजिल्यान्ड बिरुद्ध एकदिवसीय विश्वकपको सेमीफाइनलमा भारतको लागि खेलेका थिए। त्यसपछि धोनी सबै खाले क्रिकेटबाट टाढा रहेका छन्। युएईमा सेप्टेम्बर १९ देखि सुरु हुने १३ औं सिजनको आईपीएलमा धोनी लामो समय पछि मैदानमा देखिनेछन्।
धोनी मैदान बाहिर रहंदा धेरैले बिभिन्न थरि आंकलन गरिरहंदा धोनीले भने अहिलेसम्म आफ्नो मुख खोलेका छैनन्। त्यसैले पनि धोनीको आईपीएलमा फिटनेस र प्रदर्शन कस्तो रहनेछ भन्ने प्रतिक्षा सबैको रहेको छ।